Newsenepal:: चीनमा नेपाली वैज्ञानिक
केही वर्षयता नेपाली नागरिकको साझा गुनासो बन्ने गरेको छ कि चिकित्सकले स्वास्थ्य जाँचका क्रममा बिरामीलाई दुई मिनेट पनि समय दिन मान्दैनन् । चिकित्सक र बिरामीबीच हुनुपर्ने सौहार्द र भावनाको स्थान यतिखेर मेसिनले लिइदिएको छ । चिकित्सक उपचारका लागि धेरै मात्रामा ल्याबको भरपर्न थालेपछि बिरामी र चिकित्सक बीचमा हुनुपर्ने सुमधुर सम्बन्ध पनि हराएजस्तै देखिन्छ ।
यी दुई पक्ष बीचको सुमधुर सम्वादले जस्तोसुकै रोगलाई पनि आधाआधीजस्तो निको पार्ने अचुक बाण हुनसक्थ्यो । कुनै पनि रोगका विषयमा चिकित्सक र बिरामी बीचको सानो सम्वाद र सान्त्वनाले औषधिले भन्दा चाँडो निको पार्न सघाउँथ्यो । तर, हाल त्यो सम्वाद घटेको र लगभग हटेकै छ भन्दा हुन्छ । आफ्ना बिरामीसँग केही मिनेट मात्र पनि कुराकानी गर्ने फुर्सद छैन चिकित्सकसँग । यस्तो अवस्था प्रायः तेस्रो विश्वका देशहरूमा छ र त्यसमा नेपाल पनि पर्छ । ती देशमा चिकित्सकले एकपटकमा एकजना बिरामीलाई कति समय दिनुपर्छ भन्ने बारेमा पनि कुनै कानुन वा मान्यता छैन । त्यसैले केही मिनेटमै कैयौँ बिरामी हेर्नसक्ने अवस्थामा रहेका चिकित्सकले किन एउटा मात्र बिरामी हेर्ने भन्ने पनि होला । चिकित्सकले बिरामीको नाडी मात्र छाम्छन् र यो वा त्यो परीक्षणका लागि ल्याबमै पठाउने गर्छन् । यसरी ल्याब रिपोर्टमै बढी निर्भर हुन्छन् उनीहरू । यहाँ भावनाको स्थान यन्त्रले लिएको छ र यसले गर्दा डाक्टरहरू बढी महँगा भएका छन् । चीनको सियान शहरमा अवस्थित सियान युनिभर्सिटी अफ मेडिकल साइन्सेस्को रिसर्च सेन्टरमा बसेर प्राध्यापक डा. राजीव कुमार झाले यस्तैयस्तै चिन्तन मनन गरिरहेका थिए अप्रिलको मध्यतिर हामी त्यहाँ पुग्दा ।
प्राध्यापक झाकै नाममा खोलिदिएको छ चीन सरकारले रिसर्च सेन्टर र त्यसको नाम हो 'चाइना नेपाल फ्रेन्डसिप मेडिकल रिसर्च सेन्टर अफ प्रोफेसर राजीव कुमार झा' । विश्वविद्यालयले पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा खोलिदिएको यो सेन्टरको उद्घाटन गत मार्च महिनामा चीन भ्रमणमा हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । यतिखेर विश्वकै क्रूर र ठूलो चुनौती बनिरहेको क्यान्सर रोगको नियन्त्रणका उपाय खोज्ने विषयको अनुसन्धान हुन्छ त्यो रिसर्च सेन्टरमा र दिनहुँ दर्जनौँ विद्यार्थीले प्राडा राजीव झाबाट 'एसाइनमेन्ट' लिने गर्छन् । उनी त्यहाँका प्राध्यापक हुन् र चीन सरकारले घोषणा गरेका सन् २०१५ का युवा वैज्ञानिक । चीनको सान्सी प्रान्तले दिने '१०० ट्यालेन्ट' को उपाधि चीन सरकारले सन् २०१५ का लागि उनलाई प्रदान गरेको थियो । उनले यो उपाधि युवा वैज्ञानिकका रूपमा पाएका हुन् । कलेजभित्र र बाहिर पनि उनलाई चिनियाँले प्राध्यापकभन्दा बढी वैज्ञानिक भनेर चिन्ने गर्छन् । युवा वैज्ञानिक झा ३७ वर्षका छन् । यो उमेरमा नै उनले पीएचडी मात्र होइन त्यसपछिको कोर्स 'पोस्ट डक' गरिसकेका छन् । एमबीबीएसदेखि सबै कोर्स उनले चीन सरकारको छात्रवृत्तिमा गरे । उनको पीएचडी र त्यसपछिको अनुसन्धान आमाशयमा हुने क्यान्सरको औषधि पत्ता लगाउने खोजमा केन्द्रित छ ।
आमाशयमा हुने क्यान्सरमा अनुसन्धान गरिरहेका उनले क्यान्सर सेलहरूको वृद्धिको गति रोक्ने उपायको खोजी गरिरहेका छन् । उनको अध्यापनको तरिका सो विश्वविद्यालयका अरू प्राध्यापकको भन्दा फरक शैलीमा हुन्छ । विश्वविद्यालयमा कान्छा प्राध्यापकको उपाधि पाएका उनले विद्यार्थीलाई प्य्राक्टिकलमा बढी लगाउने गर्छन् । विद्यार्थीलाई गाउँ–गाउँमा पठाउने गर्छन् र आफैँ अनुसन्धान गरेर ल्याएको विषयलाई सबै प्राध्यापक र विद्यार्थीको अगाडि प्रस्तुत गर्न लगाउँछन् । जनकपुरधामको प्रवाहा गाउँमा जन्मिएका राजीव झाले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट आईएस्सी गरेका हुन् । त्यसपछिका पढ्ने र पढाउने गरी झन्डै दुई दशक चीनमा बिताएका उनी प्रतिभालाई भूगोलले छेक्दैन भन्ने कुराको प्रमाण बनेका छन् । यी युवा वैज्ञानिकको नेपालमा चिकित्सा क्षेत्रमा केही गर्ने सोच छ । चिकित्सा क्षेत्रको अनुसन्धानका लागि विश्व स्ट्यान्डर्डको एक रिसर्च सेन्टर खोल्ने योजनामा छन् उनी । 'अहिले पनि संसारमै चिकित्सा क्षेत्रमा अनुसन्धान हुन सकिरहेको छैन । नेपालमा त झन् यो अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ,' उनी भन्छन्, 'हरेक वर्ष नेपालमा विभिन्न रोगले बेवारिसे अवस्थामा नै मान्छे मर्ने गरेका छन् । यसमाथि अनुसन्धान नगरी सरकारी अधिकारीले अज्ञात रोगले मान्छे मरेको भनेर समाचार दिने गर्छन् । अहिलेको जमानामा पनि रोगको नाम अज्ञात भन्ने हुन्छ र ?'
नेपालको चिकित्सा क्षेत्र बढी बजारमुखी भएको र सरकारको दायित्व एवं अनुसन्धानका कुरा कतै पनि नआएको झाको धारणा छ । उनी सद्भावना दूतका रूपमा पनि काम गरिरहेका छन् । नेपालमा यही जेठ ८ गते आयोजना गरिएको विश्व बौद्ध सम्मेलनमा चिनियाँ बौद्धमार्गी र विद्वानहरूको सहभागिताका लागि उनले सान्सी, सिचुवान तथा अन्य छिमेकी प्रान्तका साथै राजधानी बेइजिङमा पनि विशेष अभियान नै सञ्चालन गरेका थिए । चिनियाँ नागरिकको परिश्रम गर्ने र पढ्ने बानीका कारण देश विकास सम्भव भएको झा बताउँछन् । विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकप्रति विद्यार्थीले गर्ने मानसम्मान तथा प्राध्यापकको आफूले प्राध्यापनको जागिर खाने मात्र नभई देशका लागि भावी जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम गरिरहेको छु भन्ने भावनाप्रति आफू निकै प्रभावित भएको उनको अनुभव छ ।
चिनियाँ विश्वविद्यालयबाट सर्जरीमा एमडी गरेका डा. झालाई बिरामी जाँचेर बस्ने काममा मन गएन । 'सुरुमा त पेशाकै कारणले पनि केही समय गरेँ तर त्यसमा मेरो मन लागेन । चिकित्सा क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न धेरै बाँकी रहेकोले मैले आफ्नो त्यो पेशाभन्दा पनि अनुसन्धानको कामलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको हुँ,' झा भन्छन्, 'नेपालमा अझै पनि अज्ञात रोगले मान्छे मरेको भन्ने समाचार आउने गर्छ । त्यो सुन्दा मलाई कस्तो कस्तो लाग्छ । कुनै पनि रोग अज्ञात भन्ने नै हुँदैन । त्यसमा अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ । तर, हामीकहाँ त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।'
'जिल्लामा त एमबीबीएस चिकित्सक पु¥याउनै गाह्रो भइरहेको अहिलेको अवस्थामा झन् यस्ता सूक्ष्म विषयमा कस्ले गरोस् अनुसन्धान ?' उनी थप्छन् । नेपालमा चिकित्सा क्षेत्रमा अनुसन्धान कम भएकोमा उनी चित्त दुखाउँछन् र भन्छन्, 'यस क्षेत्रको ठूलो अनुसन्धान इन्स्टिच्युट नेपालमा खोल्ने मेरो चाहना छ ।'
- See more at: http://nagariknews.com/friday/story/76065.html#sthash.Q71Up2Lc.dpuf
चिनियाँ विश्वविद्यालयबाट सर्जरीमा एमडी गरेका डा. झालाई बिरामी जाँचेर बस्ने काममा मन गएन । 'सुरुमा त पेशाकै कारणले पनि केही समय गरेँ तर त्यसमा मेरो मन लागेन । चिकित्सा क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न धेरै बाँकी रहेकोले मैले आफ्नो त्यो पेशाभन्दा पनि अनुसन्धानको कामलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको हुँ,' झा भन्छन्, 'नेपालमा अझै पनि अज्ञात रोगले मान्छे मरेको भन्ने समाचार आउने गर्छ । त्यो सुन्दा मलाई कस्तो कस्तो लाग्छ । कुनै पनि रोग अज्ञात भन्ने नै हुँदैन । त्यसमा अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ । तर, हामीकहाँ त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।' - See more at: http://nagariknews.com/friday/story/76065.html#sthash.Q71Up2Lc.dpuf
150706/5/2016 @ 11:24